REAL MADRID VS PSG: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan! – Gool FM
(Madrid) 14 Feb 2018 – Waxaa caawa ciyaar aad u xiise badan isku arkaya labada kooxood ee Real Madrid vs PSG oo ku ballansan geggada Bernabeu ee kooxda Real Madrid ee dalkaasi Spain.
Dhanka Real: Kaddib laba guul oo koobka Champions League ah, waxaa la yaab leh in booska Zinedine Zidane uu halis ku jiro haddii ay reebto PSG. Waxaa maqan Carvajal, sidaa darteed Nacho ayaa loo saarayaa inuu Neymar celiyo. Inta kale Isco ayaa ka cadcad Bale.
Dhanka PSG: Ciyaarta Bernabeu waxay caawa muujinaysaa in PSG ay noqotay koox qaangaartey oo sanado badan oo xiriir ah kaddib hawaysan karta hanashada Champions League. Emery haatan wuxuu haystaa koox dhumuc leh, waayo waxaa caawa kaydka u fadhiya Draxler iyo Di Maria oo ah laacibiin tayo leh. Waaxda weerarka waxaa wada taagan wiilasha Mbappè, Cavani iyo Neymar.
13 CASILLA, 23 KOVACIC, 11 BALE, 20 ASENSIO, 19 HAKIMI, 21 MAYORAL, 17 LUCAS VASQUEZ
1 Trapp, 3 Kimbembe, 12 Meunier, 18 Lo Celso, 23 Draxler, 27 Pastore, 11 Di Maria
"Iska jira weerar kooda" - Tababaraha Watford oo Barcelona uga digay qatarta weerarka Chelsea
Valverde oo go'aansaday inuu ku soo bilaabo Paulinho kulanka Chelsea iyo sababta oo la ogaaday